China HDMI chiratidzo chekuwedzera 7.5m inotsigira 4K & 2K kugadzirisa vagadziri uye vatengesi |Wellink
HDMI chiratidzo chekuwedzera 7.5m inotsigira 4K & 2K resolution
Iyo HDMI chiratidzo chekuwedzera ndeye HDMI yekubuda mudziyo inotambanudza HDMI inobuda mudziyo ne7.5M kune imwe chiteshi, ndiko kuti, inogona kugadzira makomputa, PS3/PS4, HD set-top mabhokisi, Apple makomputa, MacBooks, Xiaomi/Huawei/Lenovo. /Samsung/ Chiratidzo cheHDMI cheDell laptops nemimwe midziyo inowedzerwa ne7.5M, uye vashandisi vanogona panguva imwe chete kuburitsa chiratidzo kune multimedia kuratidza michina yakadai seyepamusoro-tsananguro mapurojekita, 4K/2K high-definition terevhizheni, 4K/2K yakakwirira-tsanangudzo. monitors, etc. Iyo HDMI yekubatanidza ine bhodhi yekupedzisira yakabatana kune inobuda mudziyo.
USB-A simba rekupa
7.5M 36AWG (ine bhodhi yekupedzisira HDMI yekubatanidza kuratidza kupera)
High kuchena oksijeni-isina mhangura musimboti
HDMI chiratidzo chekuwedzera 7.5M
HDMI vhidhiyo yekuisa fomati:480I/576I/480P/576P/720P/1080I/1080P/60HZ 4K/2K/30HZ
High Speed ​​Data Capacity:- iVanky 4K HDMI Cable 10 ft inotsigira HDMI 2.0b kusanganisira 18 Gbps, Mirror & Extend mode, Ultra HD 4K 2160p, HD 2K 1080p, QHD 1440p, HDCP 2.2, 48-Bit Deep Color, Audio Return(ARC1by True) Dol. audio uye Kupisa plugging.HDMI ARC inotsigira 3D surround sound.Inogadzira nyika inonyudza mukati meimba yako yekutandarira.Nakidzwa nevhidhiyo uye odhiyo panguva imwe chete pasina lag.Inotsigira akawanda maodhiyo mafomati, akadai seasina kudzvanywa 5.1, 7.1, DTS-HD, uye Dolby.
4K HDMI Cable HDR:- Yakakwana kune yako 4K UHD TV.Inoenderana nemidziyo yako yekutepfenyura, Apple TV 4K, NVIDIA SHIELD TV, CD/DVD/Blu-ray vatambi, Fire TV, Roku Ultra, PS4/5, Chinja, makomputa, kana zvimwe zvinogonesa HDMI kune yako 4K/HD TV, mamonitor, madhizaini kana mapurojekita.
Innovative kunatsiridza:- Yakagadzirirwa zvishandiso zvese zvine HDMI 2.0 yakajairika uye kumashure inoenderana neHDMI 1.4, 1.3 & 1.2.Tinplate Metal Shielding uye goridhe-yakaputirwa, corrosion-resistant connectors inogona kudzivirira kubva kunze kwekukanganiswa kwechiratidzo, inovimbisa kugadzikana kwechiratidzo chekufambisa uye kuderedza kurasikirwa kwechiratidzo.
Shanda kubva kumba zviri nyore:
iVANKY 6ft 4K HDMI Cable yaigona kutamisa data nekumhanya kwekusvika 18Gbps pa60Hz.
Tarisa midhiya yakafanana pachiratidziro hombe (Vhidhiyo mirroring modhi) kuti uwedzere kugadzikana kuona.
Tarisa mapeji akasiyana kana windows panguva imwe chete (Yakawedzerwa desktop mode) kuti uvandudze kushanda zvakanaka.
Iyi 6.6 Feet kureba HDMI Cable yakanakira yako PS4 Pro, PS4, PS3.Inopa yakatsetseka yemitambo chiitiko, hapana kubvarura skrini kana kundandama kwemufananidzo.
FPS, MOBA, mitambo yemujaho uye nezvimwe.
Apple TV 4K, Amazon Fire TV, Roku Ultra/Express/Premiere, MacBook Pro 2013, Lenovo Yoga 730/Flex 4, ThinkPad E15, Legion 5 series, DVD/Blu-ray player, AV reveiver, kamera, nezvimwe.
Midziyo yekupinza: Masaini masosi ane HDMI yekubuda interface, senge makomputa, PS3, HD set-yepamusoro mabhokisi, Apple makomputa, MacBooks, Xiaomi/Huawei/Lenovo/Samsung/Dell zvinyorwa uye zvimwe midziyo.
Ratidza zvishandiso: Ratidza midziyo ine HDMI yekupinza interface, yakadai seyepamusoro-tsanangudzo terevhizheni, yakakwirira-tsanangudzo mamonitor, uye mapurojekita.
Zvakapfuura: HDMI kuVGA inoshandura ye1080p
Zvinotevera: 5 mu1 Type- C HUB, HDMI, USB3.0, TYPE-C PD100w
Yakareba Cable Usb C Hub
Usb C Hub Yakareba Cable
Usb Hub Pasina Cable